3 amaphutha ajwayelekile lapho ugqoka | Amadoda aSitayela
3 amaphutha ajwayelekile lapho ugqoka
Namuhla sizokhuluma ngakho amaphutha amathathu ajwayelekile esiwenzayo lapho sikhetha esizokugqoka. Izikhathi eziningi asinaki izimbungulu ezincane ezingaxazululwa ngosizo oluncane.
1 Iphutha lokuqala: Izinkinobho nezinkinobho eziningi
2 Iphutha lesibili: Amasokisi
3 Iphutha lesithathu: Iziqubulo zezingubo zakho akufanele zibe nkulu kakhulu
Iphutha lokuqala: Izinkinobho nezinkinobho eziningi
Ingabe uvamise ukuzinkinobho zonke izinkinobho zejakhethi yakho? Kunomthetho onengqondo, ngaphandle kwamahembe, (okuvame ukuhamba nothayi ingxenye enkulu), ezinye izingubo ezifana namahembe wepolo, amajakhethi, ama-cardigans, amavesti nama-blazers kufanele ishiywe nenkinobho iyezinkinobho.
Kepha…. Yikuphi okufanele sishiye kungafakwanga zinkukhu? Isixazululo esihle kakhulu ukushiya inkinobho engezansi yezingubo ozigqokile, ngaphandle kokubopha. Isibonelo, ngejakhethi enezinhlamvu ezimbili, vele ubambe inkinobho ephezulu. Uma ibhantshi lakho linezinkinobho ezintathu, qhafaza phakathi nendawo noma phezulu phezulu, ngaphandle uma ama-lapels enzelwe ukuthi afakwe izinkinobho kuyo yonke indlela.
Kumavesti, ama-cardigans nezinto ezifanayo, landela umthetho oyisisekelo wesithupha ukushiya inkinobho engezansi ingenziwe. Futhi lapho ugqoke i-blazer, khipha ibhantshi ngaphambi kokuhlala phansi.
Iphutha lesibili: Amasokisi
Uma sinakekela izinto ezifana nezikwele, othayi noma ubucwebe, Kungani ngokuvamile singanakekeli amasokisi ethu?
Kukhona ezinye imithetho okufanele ilandelwe lapho ugqoke amasokisi:
I-Los amasokisi amhlophe enzelwe ijimu kuphela.
Uma sisebenzisa amasokisi amancane, inyama yesikhumba ibonakala kancane, lezi zimfushane kakhulu. Lokhu kufaka phakathi uma sihleli.
Gcina amasokisi akho amfishane ngangokunokwenzeka uma ugqoke izikhindi. Ungakhetha futhi ukugqoka amasokisi angabonakali noma amasokisi amancane.
Uma uya ku- lala, ungakhohlwa ukukhumula njalo amasokisi.
Nikeza ukuthinta okuhlukile kwisitayela sakho ngezinye amasokisi ahlekisayo, enemibala, ukuphrinta noma okudala. Kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi futhi ube namabhangqa ambalwa we amasokisi angathathi hlangothi, ikakhulukazi lapho okudingayo ukunikeza ukubukeka kobungcweti.
Iphutha lesithathu: Iziqubulo zezingubo zakho akufanele zibe nkulu kakhulu
Sonke sithanda ukugqoka isignesha ngendlela ecashile, kepha lapho iziqubulo namalogo kuthatha izingubo eziningi futhi kudonse konke ukunakekelwa kwezembatho, akubukeki neze.
Ukunambitheka okuhle kuvame ukuba sembonweni, futhi ukugqoka isitayela esiyisisekelo futhi esinobuhlakani kuzizwa kungcono kakhulu.
Nawa amaphutha amathathu ajwayelekile uma kukhulunywa ngokugqoka. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi yonke into ibalulekile nokuthi konke kuncike kulowo nalowo kithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » 3 amaphutha ajwayelekile lapho ugqoka
UDidac Jorda kusho
ngenhlonipho efanele ... uyakubona konke lokhu uma wehla ngomgwaqo? qaphela, kunezimoto ezihamba ngokushesha futhi eziyingozi…. okokugqoka kumane nje kuyisiqeshana sendwangu… kufeza inhloso yokuhlanzeka futhi uma lokho…. kuyihlazo elingakanani ukuthi siyaziswa njengenkinobho….
Phendula u-Didac Jorda
Angazi ukuthi lokhu kuphawula kubhulogi lemfashini labesilisa kubukeka kanjani, noma ucabanga ukuthi umbhali wale bhulogi wayezobona izingubo njengendwangu? Akunangqondo kanjani.
UTuro Blandon kusho
Kuhle kakhulu ngiyithandile, futhi ilungile ngisho nasemasokisi okumele sibheke kuwo
Phendula uTuro Blandon
UDavid Delfín uhlala egqoka amasokisi amhlophe:
Ngiyakuqinisekisa futhi ngoba ngike ngambona endaweni eyaziwayo enomoya wama-bohemia eMadrid. Ama-clacetine amhlophe namateku anemibala eminingi.
Sawubona marcos! Vele, konke kuncike kwisitayela somuntu ngamunye. Kulokhu, uDavid Delfín unesitayela sakhe futhi uma evula amasokisi amhlophe, simbona ngokumangalisayo. Okubalulekile ukuthi unethezeke futhi uphephe ngalokho okugqokayo 😛
Phendula Ngokuthola Isigaba
Uxolo ngokungavumelani. Ngiyamthanda uDavid Delfín, kepha noma ngubani ofaka isokisi emhlophe enesihlangu esimnyama unobuhle, noma ngabe ungumklami omkhulu noma cha.
Ngiyawuhlonipha umbono ngezinto eziningi kwezemfashini, kepha lokho engingakwazi.
Sawubona, ngiyayithanda le posi, ngoba noma ngabe iphindaphindwa kaningi kangakanani, kuhlala kukhona abantu abagqoka izikhwama ezimhlophe nezicathulo ezimnyama, futhi bahlala bebeka izaba zokuthi abanabo abanye. (Yebo, uyabathenga).
Kodwa-ke, indaba yamajakhethi ayingikholisi. Ngoba lezi zimodeli zinomzimba ophelele futhi zilingana noma kunjalo, kepha umzala wami washada onesisu esincane, futhi wasigqoka kanjalo ngoba babemtshelile. Ngize ngahamba ngafaka izinkinobho ezi-2, ingxenye yebhantshi ibingangeni kahle kwazise ivuleke kakhulu. (Wayemuhle kakhulu ezithombeni). Ngakho-ke njengoba kuthatha, ngicabanga ukuthi kuya ngohlobo lwayo ngayinye nabaseMelika.
Izicathulo zakwaSupra Skytop III, zonke zibomvu
I-Levitate Wingtip nguPrada, izicathulo zakho ezihlanganisiwe